बालविवाह गर्दैगर्दा फिल्मी शैलीमा प्रहरी पुगे पछि… – Sandesh Munch
बालविवाह गर्दैगर्दा फिल्मी शैलीमा प्रहरी पुगे पछि…
July 9, 2020 124
तनहुँ, २५ असार । बुधबार अपरान्ह तनहुँको व्यासस्थित रामथुम्कीमा धुमधामकासाथ विवाह चलिरहेको थियो । पुरोहितले मन्त्र उच्चारण गर्दै दुलाहा दुलहीको विवाह गराइरहेका थिए । बेहुलाका जन्ती र आफन्तहरु उल्लासमा थिए ।
विवाह मण्डपको नजिकै भोजभतेरको व्यवस्था चलिरहेको थियो । हिन्दू संस्कारअनुरुप पुरोहितले मन्त्र पढे । दुलहीलाई सिन्दुर लगाइदिन पुरोहितले दुलाहालाई अह्राए ।
सिन्दुर हालियो । अब उत्सवको समय थियो । तर, दूभाग्र्य त्यहीं बेला टुप्लुक्क प्रहरी पुग्यो । र, उत्सव बिथोलियो । कारण थियो, बेहुलीको उमेर ।
विश्वस्त सुत्रमार्फत सूचना पाएपछि एक्सनमा आएको प्रहरी मण्डपमा पुगेपछि स्थिति अचानक फेरियो । दुबैपक्षका आफन्त भयभीत भए । र, भयभीत हुनु स्वभाविक थियो । प्रहरीको जाँचपडतालमा बेहुलीको उमेर मात्र १४ वर्ष पाइयो ।
त्यसपछि बेहुला-बेहुलीमात्र नभइ आफन्तजन पनि प्रहरी हिरासतमा पुगे । तत्पश्चात, प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार गोरखा शैलुखन गाउँपालिका ३ बनौती निवासी २२ वर्षीय सन्तोष अर्यालसहित पाँचजनालाई बाल विवाहको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले पक्राउ गरेको छ ।
विवाहमा एक स्कोर्पियो र २ वटा भ्यानमा करिब २ दर्जन जन्ती पुगेका थिए । अर्यालले तनहुँ व्यास नगरपालिकाकी १४ वर्षीया एक किशोरीलाई बुधबार बिहे गर्ने क्रममा मण्डपबाटै पक्राउ गरेको छ ।
केटा र केटी पक्षको सहमतिमै विवाहको आयोजना गरिएपनि शंकास्पद विवाह भनेर प्रहरीले घटनास्थलमा गएर बुझ्दा दुलहीको उमेर १४ वर्ष खुल्न गएपछि बाल विवाहको कसुरमा प्रहरीले दुलाहा दुलाहीसहित दुबैतर्फका ५ जनालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई बाल विवाह ऐनअन्तरगत मुद्दा चलाइएको तनहुँ प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा केटापक्षका बाबु, आमा, केटीपक्षका बाबु र पुरोहित पक्राउ परेका छन् । बाल विवाहअन्तरगत कानूनतः दोषी पाइएमा ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त घटनाको पुष्टि गर्दै जिप्रका तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले घटनाबारे प्रहरी थप अनुसन्धानमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।
Posted in अपराध, समाचार
Prevनेपालप्रति आपत्तिजनक समाचार प्रशारण गरेपछि भारतीय च्यानल बन्द
Nextचो’रेको पैसाले स्कुटर किन्ने १४ वर्षीय नेपाली प्रहरी नियन्त्रणमा
राती १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक, १५ भन्दा बढी भेला हुन नपाइने
के हो सलह किरा ? १ हजार केजिको १ लाख दिने ? जान्नुहोस सम्पूर्ण कुरा !! कृषि वैज्ञानिक मदन राई
बर्खरै आयो सोच्ने नसकेको घटना शव तैरीरहेको अबस्थामा (भिडियोसहित)
आज राति १२ बजेदेखि काठमाडौ सहित उपत्यकाभरी कर्फ्यू लागू गर्ने तयारी
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83250)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27083)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13129)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12356)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12027)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11764)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11320)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10113)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9708)
नाग देवता स’म्भोग जजस्ले देख्छ उसको भाग्य चम्किन्छ,ॐ लेखेर एक शेयर गर्नुस
शास्त्रका अनुसार विहान यी ५ चिज देखियो भने दिन शुभ हुन्छ
यी राशि भएका युवतीलाई बुहारी बनाउँदा घर बन्छ स्वर्ग
भाग्यमानीले मात्र देख्ने नागको अण्डा देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ
भाकल के हो, के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ जान्न जरुरी छ